မာတင် Vrijland: ခနယူးဇီလန်နှစ်ခုဗလီအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုဦးသေဆုံး 49
(PayPal ကမပါဘဲ) တိုက်ရိုက်
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 15 2019 အပေါ်	• 20 မှတ်ချက်
မီဒီယာ၏အဆိုအရမှာ 49 သေဆုံးမှုရှိပါတယ် နှစ်ခုဗလီအပေါ်တိုက်ခိုက် နယူးဇီလန်အတွက်အစားခ။ အဘယ်သူမျှမသံသယဒီနံပါတ်ကိုအထက်သို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောလိမ့်မည်။ အဲဒီထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောသို့လူအရောက်စေဖို့ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးပတျဝနျးကငျြမငြိမ်သက်မှုများအပေါငျးတို့သတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချိန်ကတစ်ဦးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသူကမွတ်စ်လင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လူဦးရေအုပ်စုများအကြားတင်းမာမှုနေဆဲထပ်မံမြင့်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကမ္ဘာကြီး၏ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်အာရုံအကြားတင်းမာမှုထားဖို့ကြိုးစားပါတယ်ကြောင်းမီဒီယာဝါဒဖြန့်ခြင်းအားဖြင့်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှတဆင့်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး, ထို့နောက်ထိုကဲ့သို့သောတိုက်ခိုက်မှုအချို့ရလဒ်ကိုပေးထားပါတယ်။
"သို့သော်မာတင် Vrijland, သင်သည်ဤတိုက်ခိုက်မှုအတုကြောင်းကိုပြောမသွားပါတယ်?"ငါတကယ်မဆိုသေချာနှင့်အတူမပြောဝံ့။ ငါဆိုသည်ကားပါလိမ့်မယ်တစ်ခုတည်းသောအရာထိုကဲ့သို့သောတိုက်ခိုက်မှုနောက်တဖန်အခြားဆန့်ကျင်သောလူဦးရေ၏လက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးနောက်ကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ဝဲနှင့်လက်ယာယိမ်းနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်အုပ်စုများသိသိသာသာနောက်တဖန်ဒီပြင်ပတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပိုပြီးရဲကိုပြည်နယ်အတိုင်းအတာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကမီဒီယာအစီရင်ခံစာများဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မေးခွန်းများကိုထိုကဲ့သို့သောတိုက်ခိုက်မှုများအသုံးပြုပုံတိုင်းနိုင်ငံသား '' Anti-အကြမ်းဖက်ဝါဒအစီအမံ "ဤမျှလောက်များစွာသောခေါ်ဆောင်သွားပြီနောက်တဖန်ကျေနပ်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pc ရဲ့ i-Pad နှင့်စမတ်ဖုန်းများကြီးတွေ data တွေကိုသုံးပြီးပုတ်နေကြသည်ကျနော်တို့နေရာတိုင်းချထားပါသည်သမျှသောကင်မရာများနှင့်လုံခြုံရေးတံခါးတို့နှင့်အတူအလိုတော်နိုင်နောက်တဖန်ပျော်ရွှင်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နောက်တဖန်ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ်လက်ခံလိမ့်မည်!
ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်နှင့်တရားသူကြီးကိုသွားမီ။ မီဒီယာဖောင်းပွနှင့်အတူလူတွေဆော့ကစားခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးမှနည်းပညာပိုင်းဖြစ်နိုင်မယ့်အဘယ်အရာကိုကိုယ်အဘို့ကိုကြည့်ပါ: အဘယျသို့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာနည်းလမ်းများတစ်ခုတည်းပုံရိပ်၏ထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်ရှိရသောအခါကြှနျုပျတို့သညျဤအချိန်၌ရှိကြ၏ရနိုင်ပါသလား မီဒီယာယုံကြည်မှုတွေ့မြင်ရ?
ကျနော်တို့ TV ပေါ်မှာကြည့်ရှုရာ၏အဘယ်အရာကိုမျှသေချာပေါက်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ သင်သည်အဘယ်သို့ဆောင်ကြဉ်းသတင်း "အမှန်တရား" ပင်ဖြစ်သည်တကယ်တော့ယုံကြည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး "ယုံကွညျခွငျး" ထက်ပိုပြီးအချည်းနှီးဖြစ်၏ယုံကြည်ပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့်မီဒီယာအမှန်တရားနှင့်လုပ်ကြံသတင်းပြပွဲပြသနိုင်ဖို့ခိုလှုံပါ၏။ သို့သော်ကျနော်တို့မီဒီယာကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်သောထားသောကြွယ်ဝသောဘီလျံနာကိုကြည့်, ငါတို့နေဆဲအတန်ငယ်သံသယဖြစ်ဖွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အသင်းတော်၏သင်းအုပ်ဆရာလည်းပိုနှစ်သက်ယုံကြည်ပါတယ်။ ကလေးများစော်ကားသူကိုယဇ်ပုရောဟိတ်များကဲ့သို့ပင်။ ကျနော်တို့ဘုရားကျောင်းယုံကြည်စိတ်ချဖို့ဆက်လက်။ ဒါကြောင့်လည်းမီဒီယာများအတွက်လား?
ကျနော်တို့လိုချင်များနှင့်သူတို့တစ်တွေလိုချင်သောဦးတည်ချက်အတွက်လူတို့တွင်စိတ်ဓါတ်များခုတ်မောင်းဖို့အကြီးအစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုဆော့ကစားနိုင်မယ်တပင်မျှမနိုင်။ polarity ကတစ်တပ်မက်လိုချင်သောအဦးတည်စီးဆင်းရန်အစဉ်အမြဲသဘာဝကျကျဦးဆောင်; ထိုကဲ့သို့သောဘက်ထရီတစ်ပေါင်းနှင့်သင်တစ်ဦးစီး generate သောအနုတ်တိုင်ရှိပါတယ်။ (သူမ၏အိတ်ကပ်ထဲတွင်မီဒီယာရှိခြင်း) သည်အထက်တန်းလွှာအပေါ်ဆုံးအလွှာအတွက် polarity က generate မှမရရှိနိုင်သမျှသောအရင်းအမြစ်များရှိပါတယ်။ သူတို့က "Antifa ဆန့်ကျင် Pegida" ဒါကြောင့်အပေါ်မွတ်စ်လင်ဆန့်ကျင်ခရစ်ယာန်, ညာဘက် left နှင့်ချင်တယ်။ ပရမ်းပတာများအတွက်အခြေခံတင်သောနှင့်ဤပရမ်းပတာထံမှသူတို့သည်အစဉ်သစ်ကိုအမိန့်ဖန်တီးထို့ကြောင့်အာဏာကိုအမြဲပိုပြီးဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ (ဗီဒီယိုကိုအောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်)
"ဟုတ်ကဲ့, ဒါပေမယ့်ငါနေဆဲသူတို့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အသတ်ခံခဲ့ကြသူတွေကိုသိသောကယ့်ကိုဝမ်းနည်းဖြစ်ကြပြီးကျွန်မမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကနေကြားသောစစ်မှန်သောလူတို့နှင့်အတူအစစ်အမှန်အင်တာဗျူးပေါ့"။ ကျနော်တို့ကအားလုံးကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သူကအဖြစ်ကောင်းစွာအတုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကအစွန်းပေါ်တွင်လူမြိုးတစျမြိုးထားရန်တင်းမာမှု (polarity က) အားတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုပါစို့, သင်ရုပ်ရှင်နည်းစနစ် (AI အ, တုအသိဉာဏ် software ကိုဖြေရှင်းချက်) သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာသွေးထွက်သံယိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သူတစ်ဦး Hitman တို့ကသုံးပြီးဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သောတစ်ဦးတိုက်ခိုက်အစစ်အမှန်နှင့်စစ်မှန်ကြောင်းနေဆဲသင်တန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုသငျသညျဆင်ကန်းတောတိုးမီဒီယာတင်ပြနေကြတယ်ဆိုတာကိုပိုပြီးအားကိုးမရနိုင်သည်ကိုသာသတိပေးပါ။ သမိုင်းကြောင်းအရ, ကျနော်တို့မီဒီယာကယ့်ကိုတစ်ဦးအလွန်သန့်ရှင်းတဲ့လမ်းကြောင်းစံချိန်မပြောနိုင်။
အထက်ပါဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုဆယ်စုနှစ်အမျိုးမျိုးသော greenscreen ပုံရိပ်တွေအတုလုပ်နိုင်မှတဆင့်ပြသထားတယ်။ ဆော့ဖျဝဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်အတူသင်သို့သော်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်။ သငျသညျလည်းမရှိခဲ့ချေ-ဥပမာ, လုံးဝ (အောက်တွင်ပထမဦးဆုံးသောဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ) ဘာမျှမဖန်တီးရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထိုအခါသင်ကအဲဒီလူကိုတကယ်တည်ရှိခဲ့ပုံရှိရာသူတို့အား Self-created မျက်နှာများနှင့်အတူအခြားတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးပေးနိုင်ပါသည်။ အဆုံးစွန်သောသငျသညျမျက်နှာပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်း software ကို အသုံးပြု. (ဒုတိယဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ) ဖြစ်ကြသည်။ သင်မတည်ရှိပါဘူးသူတွေကိုအားဖြင့်လမ်းပေါ်မှာအင်တာဗျူးများလုပ်ဆောင်သွားရန်3ပြဆော့ဖ်ဝဲဖြေရှင်းနည်းများကိုသုံးနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုစိတ်ကူးနိုင်သလား? သငျသညျ non-မရှိခဲ့သူတစ်ဦး (နက်ရှိုင်းသောအတု) ကိုဖန်တီးဖို့, အခင်းဖြစ်ပွားရာမှာနေရာနှင့်မျက်နှာပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းဆော့ဖျဝဲတစျဆငျ့တစ်ရပ်တည်ချက်-in ကိုသရုပ်ဆောင်များ၏သစ်ကိုမကျြနှာကိုနေရာတစ်စုံတစ်ဦးကိုများအတွက်အစိမ်းရောင် screen ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သငျသညျရင်ဆိုင်ရနိုင်ပြီးစကားသံကိုမြည်းစမ်းဖို့ညှိနှင့်မျှမတို့အချိန်၌သင်တို့ကိုလမ်းပေါ်မှာအတုတိုက်ခိုက်မှုအနီးတွင် non-တည်ရှိ-သကျသခေံအတူနက်ရှိုင်းသောအတုအင်တာဗျူးရှိသည်။ တကယ်တော့သင်အမှန်တကယ်လုံးကိုအပြည့်အဝမြင်ကွင်းတစ်ခုထားနိုင်ပါတယ်။ "ဟုတ်ကဲ့, ဒါပေမယ့်မျက်မြင်သက်သေများရှိသနညျး ကလူကိုသိရန်တောင်းဆိုသူတွေကိုရှိပါတယ်? အားလုံးရဲနှင့်လူနာတင်ယာဉ်အမှုထမ်းပစ္စုပ္ပန်နေဆဲရှိပါသလော"ထိုကြောင့်သင်သည်နှစ်ခုစလုံးနက်ရှိုင်းသောအတုလူမှုမီဒီယာ profile များကိုဖြစ်ပြီးကျန်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဝင်ငွေတော်တော်လေးအများကြီးအဆင်သင့်အိတ်ကပ်ပိုက်ဆံရှိပါတယ်။ "
ဟုတ်ကဲ့, ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးတိုက်ခိုက်တောင်းပန်ပါတယ်, တကယ်နည်းတူကောင်းမွန်စွာပြုကြပေမယ့်ဝန်ကြီး၌ငါ၏ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်ပါသည်, ထို pedo ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်မီဒီယာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒါမဟုတ်ဒီလိုမီဒီယာပေါက်ကွဲမှုနောက်ကွယ်မှဖြစ်နိုင်ခြေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးရန်သင့်အားရည်ညွှန်းသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်သိကြရမည်ဖြစ်သည်သငျသညျအဘယျသို့ယုံကြည်ကြဘူး။
source link ကို entries တွေကို: telegraaf.nl
နယူးဇီလန်ကိုရပ်တန့်အဓိပ္ပာယ်တည်ထောင်ခြင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု, လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်လူဦးရေ polarization ကို
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု 24 အောက်တိုဘာလရင်ပြင် Utrecht တစ်ဦးထိတ်လန့်သို့တစ်နိုင်ငံလုံး!
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲရန်ရုံးပိတ်ရက် "သည် Le Quatorze Juillet on" nice တိုက်ခိုက်
စီအိုင်အေရဲ့ချာလီ Hebdo အသစ်ကကာတွန်းနှိုးဆော်ခြင်း "မွတ်စ်လင်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအ" တိုးပွါးသင့်တယ်
ဘီလ် Cooper ကနှင့်မင်းသား၏ကဘယ်လိုကြောက်မက်ဘွယ်သောအဟောကိန်းများထွက် လာ. ,
Tags:: တို့, ခ, ဗလီ, ဗလီ, ဗလီ, နယူးဇီလန်, ကြောက်မက်ဘွယ်သောအ, အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု, အကြမ်းဘက်ဝါဒ, နှစ်
15 မှမတ်လ 2019 13: 57
ဒီဗီဒီယိုနေဆဲ pass ကိုမြင်လျှင် ... ရင်းမြစ်သူသည်သိကြပေမယ့်ကိုယ့်စံချိန်များအတွက်ပါဘူး
16 မှမတ်လ 2019 02: 48
15 မှမတ်လ 2019 14: 04
"အသွေးအကြှနျုပျကိုဝင်လို့ခဲ့ပါတယ် .. " အစဉ်အဆက်အသန့်ရှင်းဆုံးနှင့်အလှဆုံးအင်္ကျီမျက်နှာတွေနဲ့လူကိုကပြောပါတယ်
16 မှမတ်လ 2019 03: 07
ပြဿနာ, တုံ့ပြန်မှု, ဖြေရှင်းချက်မည်သူမဆို?
15 မှမတ်လ 2019 15: 14
ငါမှားဘူးဆိုရငျ, ခကိုလည်းသတင်းအတွက်အချို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဘာကြောင့်မသိရပါဘူး။ မည်သည့်ဆက်သွယ်မှုရှိပါသလား? သင်ကဆနျးစစျဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
အဆိုပါလုပ်ခ Slave wrote:
15 မှမတ်လ 2019 15: 38
တစ်ဦး verzakten ငလျင်နှင့်အဆောက်အဦးထို့နောက်ရှိခဲ့သည် ...
15 မှမတ်လ 2019 15: 41
15 မှမတ်လ 2019 15: 51
15 မှမတ်လ 2019 17: 04
Idd + သင်မတ်လလာမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရည်ညွှန်းနေ့စွဲ 22-3 သင့်ရဲ့ Ides ရှိ
15 မှမတ်လ 2019 17: 53
15 မှမတ်လ 2019 16: 52
ငါမျိုးစုံပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်သံသယရှိသူရှိပါတယ်အဖမ်းခံရပြီနားလည်ပါသည်။ အဆိုပါနောက်ခံနဲ့စိတ်ရင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့လူထုတရားခွင်ရှိလိမ့်မည်ဆိုပါကစဉ်းစား။ တရားခံတဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို run ဖို့မဖြစ်နိုင်မဟုတ်လုံခြုံရေးသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုစိမျ့အားဖြင့်ရှိခဲ့ခဲ့ကြသည်။ သင်မကြာခဏလူတစ်ဦးထက်ပိုသောဘာမျှမကြားကြောင်းထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလျင်မြန်စွာ vrijgekaten ကြောင်းတွေ့မြင်နှငျ့သငျ။
သငျသညျထိုကဲ့သို့သော zombiland, နယ်သာလန်က "ကောင်းသော" ရှေ့နေများနှင့်တရားသူကြီးများအဖြစ်နယူးဇီလန်ရောက်နေလျှင်ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မည်ရှိမရှိကမယုံကြဘူး။
15 မှမတ်လ 2019 19: 03
မောင်လေးကလည်းအားဖြင့်ပြန်တမ်း false အလံစစ်ဆင်ရေး?
"အဘယ်သူမျှမအုပ်စုသည်ငါ၏အတိုက်ခိုက်အမိန့်, ငါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်ရမည်။ ငါပေးသော was've ဘယ်တိုက်ခိုက်မှုများ၏ထောက်ခံမှုအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအတွက်ပြန်လည်မွေးဖွား Knights Templar ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်လုပ်ခဲ့တယ်သော်လည်း။ "
15 မှမတ်လ 2019 21: 06
အပြင်, ငါဘိုးအင်း 737 မက်စ်နှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမကြားနိုင်, ဘယ်လိုတုန်းပဲလုပ်နေလိမ့်မလဲ? ဒါဟာတကယ်တစ်စုံတစ်ဦးကဘိုးအင်းနှင့်၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များကြောင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရှိပါတယ်လိုလားပုံရသည်။
15 မှမတ်လ 2019 21: 54
ဒါဟာအနွယ်အပေါင်းတို့ excite မှယခုအလွန်လွယ်ကူသည်။ ယခင်ကအခုသူတို့အများကြီးမြန်, တူညီတဲ့ပြုလေ၏။
Urk သငျသညျတူညီသောပုံပြင်, အစွန်းရောက်လက်ယာအကျိုးဆက်များနှင့်အတူဆင်းထားကြသူခရစ်ယာန်လူငယ်များကိုကြည့်ပါ။ နယူးဇီလန်အတွက်ရပ်တန့် ပို. ပင်ခံစားချက်တွေကို go ဖြစ်ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ကဲ့သို့တူညီသောအမျိုးအစားမီဒီယာ၌ထားတော်မူ၏မှ play သဘောပေါက်သောလူ။
သငျသညျမွတ်စလင်များရိုက်ကူးဖို့သြစတြေးလျမဗလီရှိပါကတွေးမိဖို့စတင်ခဲ့သူကိုအဘယ်သူမျှမမျှခရစ်တော်အား-ဘုရားကျောင်းပိုကောင်းအသံ။ ဒါကြောင့်မွတ်စ်လင်ခတခုတခုအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်။ ယင်းဖော်ရွေ Urk တိုက်ခိုက်မှုပါမယ်အဘိဓါန် Moroccan လိုပဲ။ သင်မည်သို့အားလုံးလက်နက်တွေမှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၌သင်တို့၏ပင်စည်အတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောလက်နက်များရပါသလဲ?
tromp = = Trump အားလုံးဖြစ်ပျက် trumpet'll ကဒီမှာ (အလွန်အမင်းနိမ့်ကြိမ်နှုန်း) el- ### ### ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် Elfie အမည်ပြောပါ။
ငါကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအားလုံးမှတ်ချက်များအများဆုံး Fairy လမ်းညွှန်မှုကိုပြသ ###
16 မှမတ်လ 2019 06: 51
အဘယ်မှာရှိတစ်နှစ် 28 ပိုက်ဆံက၎င်း၏အမြင်အဘို့အနိုင်ငံအများအပြားကသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မြေပြင်ပေးဖို့မုန်းဖို့ဥရောပထွက်ပျံသန်းဖို့ရ။ သို့ဖြစ်လျှင်ဤလူကြီးလူကောင်းဒါနီးဒင်အတွက်လအနည်းငယ်ကသူ၏အသက်မွေးမှုတစ်ဦးသေနတ်ပစ်ကလပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည်ထို့နောက်လုပ်ရပ်လုပ်ဖို့ကားများငှားနိုင်သနည်း ဘယ်လိုအကြွေးကဒ်နဲ့တူတစ်စုံတစ်ဦးပါပဲ။
သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ငါ့ကိုအများဆုံး becvreemdt အထင်ကြီးနှစ်ခုပစ်ခတ်မှုအကြားအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါ 117မိနစ်နှင့်မိနစ်ကြား၏။ အကွာအဝေး6ကီလိုမီတာအကြောင်း, ဒါပေမယ့်သင်ကကားထဲတွင်ပထမဦးဆုံးဗလီကနေဖတ်ပါ, ပြီးတော့အကွာအဝေးခရီးသွားလာရန်ရှိသည်, နက်ဖြန် automparkeren ဗလီအလုံအလောက်အချိန်ဤကာလဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယနေ့ကဒီမှာနေထိုင်နေကြသောကြောင့်တဖန်ငါလမ်းကြောင်းယူချင်တယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, များစွာသောလမ်းများရုတ်တရက်ပထမဦးဆုံးသေနတ်ပစ်၏ဗလီန်းကျင်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ ike ကအပတ်အတွင်းကဤ6ကီလိုမီတာ (တစ်ဦးကသောကြာနေ့တွင်) ကို7မိနစ်အတွင်းဖုံးလွှမ်းစေနိုင်သည်ဆိုပါကကြည့်ရှုဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်။
16 မှမတ်လ 2019 07: 30
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့! Post ကျွန်တော်တို့ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ ..
16 မှမတ်လ 2019 08: 36
ဇောက်ထိုးကင်မရာနဲ့ရုပ်ရှင်လူတိုင်းပစ်ခတ်ကြပြီးတကယ်သေသေချာအောင်တဖန်ရိုက်ပြန်တတ်ကြောင်းကိုလည်းထူးဆန်းကဘာလဲ။ အခြားဗလီရှိလူများအများကြီးရိုက်ကူးကြောင်းအများအပြားဒဏ်ရာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာထိုင်။ ဒါဟာသင်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်သင်၏ဖုန်းများအတွက်ရောက်ရှိမငါ့ကိုပုံရသည်။ သငျသညျသင်၏အစ်ကိုတို့ကိုကူညီမယ့်နေ?
mb ။ wrote:
16 မှမတ်လ 2019 14: 19
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအစီရင်ခံအတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်မီဒီယာ၏အလုအယက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်နိုင်ပါစေ။ ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့လျှင် (မိသားစု, စသည်တို့ကိုသူ) လူများ၏ဘဝများအကြောင်းပါ။
- သတင်းရင်းမြစ်များ (အခြားမီဒီယာ, ဝန်ကြီးချုပ်, etc.Je ရဲလက်ကိုင်သားကောင်များနေသောနှင့် ပတ်သက်. ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အခြားသူများကိုမျှော်လင့်မယ်။
- ခံရသူအရေအတွက်အရေးပါတဲ့ပြည်နယ်အတွက်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ မဟုတ်ရင်ဒဏ်ရာရထက်ပိုသေပြီ။
- "သူကတရားရုံးစနေနေ့နှင့်တရားဝင်တစ်သံသယရှိသူများတွင်ပေါ်လာရကြမည်ဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါအာဏာပိုင်များကိုတရားဝင်စကားမစပ်, ဝိသေသလက္ခဏာကိုအတည်ပြုကြသည်မဟုတ်။ "
- "အဆိုပါ 28 အရွယ် Brenton Tarrant ဖမ်းဆီးလူသတ်မှု (0700 နာရီစနေနေ့နယူးဇီလန်အချိန်) နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
- "ရှိပါတယ်ပေါက်ကွဲလည်းတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမော်တော်ယာဉ်များမှပူးတွဲပါခဲ့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ " (?)
- (အတန်ငယ်အချိန်မတိုင်မီ) 'ပရီးမီးယားလိဂ် Jacinda Ardern သေနတ်သမားအစွန်းရောက်သဘောထားခဲ့ကြောင်းအစောပိုင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွက်အတည်ပြုခဲ့သည်' '
- ဒါဟာကြီးမားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု ... လိမ့်မည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးရုပ်ပုံပါပြီရမယ်
- '' နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်, Jacinda Adern, ထိတ်လန့်အတွက်တုံ့ပြန်။ သူမသည် "ထူထပ်နေ့ 'အကြောင်းကိုစကားပြောနှင့်ဤအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်မျှသံသယရှိခဲ့ပါတယ်။ " (ညနေများအတွက်အချိန်မတိုင်မီ)
- ဆီးရီးယားအဖွဲ့အစည်းက 1 ဆီးရီးယား၏အဆိုအရအနည်းဆုံးရှိဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် "။ (သီးခြားအရင်းအမြစ်)
- "အများအပြားကလေးများသားကောင်များအကြားလည်းဖြစ်ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးအစီရင်ခံစာများအဆိုအရအားလုံးဆီးရီးယားကလေးတွေအကြောင်းပါ။ (လာဖွယ်ရှိနေပြီး, သင်မ?)
- "သူ၏သားသမီးများကိုအာဖဂန်နစ္စတန်မှာသူတို့ရဲ့ဖခင်သင်္ဂြိုဟ်ရန်ရန်ပုံငွေရှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစတင်ပါပြီ။ (ဒါကြောင့်မကြာမီ)
- သူတို့ကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်စဉ်အတွင်းဘဝဆီသို့ရောက် လာ. , ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့် BDNews24.com ကနေသတင်းအရသိရှိရသည်။ (သီးခြားရင်းမြစ်)
- ဆော်ဒီသတင်းအဖွဲ့အစည်းက Al Arabiya အဆိုအရ Mohsen al-Muzaini သည်သူ၏ဒဏ်ရာကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ (သီးခြားရင်းမြစ်)
- "နောက်ထပ်သား Khaled ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ " (မဗလီ, ဒါမှမဟုတ်ပင်လူတွေ indentified မဟုတ်?)
16 မှမတ်လ 2019 14: 31
... နှင့်သိသာကာကွယ်နိုင်သောရောဂါနှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းမှသေဆုံးသောသူအပေါင်းတို့ကလူလုပ်နေတယ်ကြသည်မဟုတ်။ အဘယ်သူမျှမကပိုသတင်း ...
16 မှမတ်လ 2019 16: 06
အဘယ်သို့ငါနားလည်သည့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက် Knights Templar (Freemasonry) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်နှင့်အခိုင်အမာကြမည်ဟုအဖွဲ့အစည်းသူပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကိုအတော်လေးအင်္ဂါအများရှိအဟောင်းဆားဗီး (စစ်ရေးတဝက်) စစ်ပြန်ဖြစ်ကြသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကိုဆိုဗိုများအတွက်ရုန်းကန် (မကြာသေးခင်ကနိုင်ငံရေးမတင်းမာမှုများပေးထားသော) ဖြစ်ကောင်းအားလုံးလာမယ့်လအတွင်းအပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့အတွက်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးရှိသည်။
သေနတ်သမား Brenton Tarrant (တိုက်ရိုက်စီး) ခနယူးဇီလန်၏ဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူး »
ဇူလိုင်လ 2017 အတွက်ဧည့်သည်
ဂျက်ဖရီ Epstein ၏အမှု၌လိပ်အဲဒီမှာအကြီးအကဲဖြစ်ပါသလား
အဆိုပါခန့်မှန်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဖိုရမ် (FVD) debacle
ဘယ်လိုအန္တရာယ် 5G အမှန်တကယ်သည်နှင့်မည်သို့လျှို့ဝှက်စွာတပ်ဆင်ပြီး
အဆိုပါထောက်ခံသူများတိုက်ခိုက်နေ "မတူကွဲပြားမှုများနှင့်နိုင်အောင်" စဉ်းစားနေစဉ်အတွင်းအဆိုပါသက်တံ့ကတော့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ဘာသာတရားဖြစ်ပါသည်
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အိုစမာ op အမေဇုံကမ္ဘာမြေရဲ့အဆုတ်ကိုမီးပေါ်မှာများမှာမီး!
ကင်မရာ2op အမေဇုံကမ္ဘာမြေရဲ့အဆုတ်ကိုမီးပေါ်မှာများမှာမီး!
ခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင် op အဘယ်ကြောင့်လိင် 21e ရာစုလိင်ကွဲပျောက်ကွယ်သွားများအတွက်အသစ်များကိုစံတစ်ခုဖြစ်သည်
မာတင် Vrijland op အမေဇုံကမ္ဘာမြေရဲ့အဆုတ်ကိုမီးပေါ်မှာများမှာမီး!
အီးမေးလ်ဖြင့်နေ့စဉ် updates များကို
1.615 သည်အခြား subscriber များအား join
2019 မာတင် Vrijland ©။ All rights reserved ။ Solostream အားဖြင့် theme.